Dawlada Oo Laga Codsaday in ay Cadaalada hor Keenan Dadkii Gubay Marxuum Axmed Dawlo
Axmed Muqtaar Dowlo oo ahaa nin Nin Garashle ah kuna shaqeysta farsamada sameynta gaadiidka ,ayaa Khamiistii la soo dhaafay si argagax leh loogu dilay Xaafada Towfiiq ee Degmada Yaaqshiid, iyadoo dilkiisa uu la xiriiray fal hayb sooc guur ah. Wiil uu adeer u yahay Axmed dowlo...
Maxkamada Qalabka Sida oo Xukun Dil ah ku Riday Askari Hore u Dilay Bajaajle
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ayaa xukun dil toogasho ah ku riday Maxamed Xuseen Siidow oo ka mid ah Ciidamada Booliska ee Gobolka Hiiraan, sida uu sheegay Xasan Cali Nuur Shuute, Gudoomiyaha Maxkamadda Ciidamada oo ku sugan Magaalada Baledweyne. Askariga xukunka dilka ah...
Mareekanka oo Sheegay in ay Dileyn 18 Shabaab
Afhayeenka u hadlay Taliska Militariga Mareykanka ee AFRICOM ayaa sheegay in duqeyn ka dhacday Jubbaland Jimcihii shalay ay ku dileen ugu yaraan 18 maleeshiyaadka Al Shabaab ah. Nate Herring afhayeenka AFRICOM ayaa sheegay in duqeyntan ahayd mid looga hortagayey xoogaga Al...
Gabar u dhimatay Sun ay Cabtay Degmada Yaaqshiid ee Muqdisho
Fal argagax leh ayaa caawa laga soo sheegayaa Degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir, iyadoo maalmahan ay sii kordhayaan dhacdooyinka naxdinta leh ee ka dhacaya Muqdisho. Shukri C/laahi Raagge oo daganayd Xaafadda Juungal ee Muqdisho ayaa geeriyootay caawa, kadib markii ay cabtay...
Madaxweynaha Hirshabele Oo Gudoomiya Cusub U Magacaabay Gobolka Banaadir
Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa u magacaabay Xilka Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan Mudane Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed, kadib warqad ka soo baxday xafiiska Madaxweynaha Hirshabelle. Xilkaan ayaa waxaa laga qaaday Gudoomiyihii hore ee Gobolka...
Booliska Oo Sheegay in Sedex Ruux usoo Qabteen Dil Markale Maanta ka dhacay Muqdisho
Booliska Somaliya ayaa sheegay inay soo qabteen dad lala xiriirinaayo inay ka dambeeyeen dil loo gaystay Wiil yar oo lagu magacaabo Sufyaan Cusmaan oo Shan sano jir ahaa. Wiilkaan ayaa la sheegay shalay ehelkiisa inay baadigoob xoog leh u galeen, kadib markii ay waayeen, waxaana...
Madaxweyne Farmaajo Oo shir Deg deg Ah isugu Yeray Madaxda Galmudug
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isugu yeeray madaxda Dowlad Goboleedka Galmudug si loo soo afjaro xaaladaha siyaasadeed iyo amni ee kasoo cusboonaaday deegaannadaas. Madaxweynuhu waxa uu si dhaw ula socdaa khilaafaadka...
Faafahin Ku saabsan Qaraxyadii Maanta ka dhacay Magaalda Muqdisho
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxyo ka dhacay isgoyska dabka ee Magaalada Muqdisho. Qaraxa koowaad ayaa wuxuu ka dhacay Isgosyka dabka, kadib markii gaari lagu soo dhajiyay qaraxa oo maraayay isgoyska Bartankiisa uu qarxay. Warar ay helayso...
Wiil Dhalanyaro Caan aha oo Lagu Dilay Magalada Muqdisho
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya suuqa Caanaha Seybiyaano ee magaalada Muqdisho, wiil dhalinyaro ahaa oo watay gaari nuuca raaxada ah ayaa lagu dilay halkaasi. Dad goobjoog u ahaa dhacdadan ayaa waxa ay ARLAADII.NET u sheegeen inay arkeen ciidan watay gaari nuuca...
Askari Dil u geystay Bajaajle oo kasoo muuqday Maxkamada Ciidamada
Allaha u naxariistee Yaasiin Cali Saney oo mooto bajaajle ahaa ayaa u geeriyooday xabad uu ku dhuftay eedeysane Mahad Xuseen Shiidow oo ka tirsan ciidamada booliska degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, 27-kii bishii August ee sanadkan Dhimashada Yaasiin Cali Saneey ayaa...